Egwu na-atụ ụjọ: Identghọta Wayo na Ntanetị | Martech Zone
Tọzdee, Machị 1, 2007 Fraịde, Machị 9, 2007 Douglas Karr
John Stossel nke ABC na 20/20 nwere a kediegwu show izu gara aga, Egwu Egwu: Na-echegbu Onwe Gị na America. O nyere data siri ike na-ekwu maka mmetụta mgbasa ozi na ndụ anyị na otu o si emetụta ọha na eze na egwu ya.
(O nwekwara Stephen Dubner si Freakonomics na ihe nkiri ahụ, n'ihi ya, aghaghị m ile ya!)
Nsogbu ọ chọpụtara bụ na ọtụtụ n'ime ihe ndị anyị na-echegbu onwe anyị abụghị ihe egwu ma ọlị. Otu ihe atụ na-atụ n'anya bụ iji ịnwe egbe buru ibu ma ọ bụ ebe a na-egwu mmiri… ọdọ mmiri na-egbu ọtụtụ ụmụaka karịa egbe egbe. Maka ihe ụfọdụ, anyị anaghị atụ ụjọ iziga ụmụaka anyị ụlọ nwere ọdọ mmiri… mana anyị agaghị ezigara ha ụlọ nwere egbe gbagoro agba.
Izu a, ụjọ jidere m. Aga m echekwa nkọwa ndị ahụ, mana esonyeere m ebe nrụọrụ weebụ ịkparịta ụka n'thatntanet nke nwere ụfọdụ ngwaọrụ dị egwu maka iwulite mmekọrịta ezinụlọ gị yana ịnwe ka 'netwọkụ' gị pụọ ma too n'onwe gị. Ihe ị ga-eme na saịtị ahụ bụ na ị batara ezinụlọ gị niile na mmekọrịta ha na gị… ngwa ahụ ka ndị ọzọ… kpọtụrụ onye ọ bụla n'ime ha ịbanye ma gaa n'ihu na-ewu ezinụlọ ahụ. Ọ bụ ngwa dị oke egwu na njirimara niile ziri ezi… viral, akụrụngwa, nchekwa data kọntaktị, ha niile n'otu obere ngwugwu Web 2.0.
Nke a bụ ihe rub ị banye n'ezinụlọ gị ozi. Emere m ka nzuzu na-agba nke niile na-apụ ma tinye data ezinụlọ m n'ebe ahụ. Ngwa ahụ kpọtụụrụ onye ọ bụla n'ezinụlọ m. Ndị na-eto eto jidere wee malite iwu netwọkụ ha. Ọ bụ akụkọ dị iche na ndị okenye. Would gaara eche na m debere paspọtụ ezinụlọ m na kaadị kredit n'ịntanetị maka ịnara! Ezigbo ụjọ jidere ha na m ga-eme ụdị ihe ahụ. Rifiedjọ juru!
Ohi amata, izu nzuzo njirimara !!! Ebumnuche m, ọgụgụ isi m, na - ihe niile m tụkwasịrị obi - ka etinyechara ọnụ ozugbo. Ozi ịntanetị na-enwu ọkụ soro ozi ịntanetị na-enwu ọkụ… na-akụziri m ihe iyi egwu a na-enweghị atụ na etu m siri lekọta ezinụlọ m anya. Agbanyeghị na enweghị m nchegbu gbasara izu ohi, emere m ngwa ngwa gaa ụlọ ọrụ ahụ iji nweta data a na-ekwu… yana data metụtara ya… gbadara ozugbo. Nke ahụ akwụsịghị ịba mba ahụ. Ekwesịrị m ịgwa gị… na 38 afọ ma nwee afọ iri n'azụ m na Industrylọ Ọrụ, ị gaara eche na m bụ ihe kachasị njọ na-eme ụgbụ ebe ọ bụ na SPAM.
Aga m enwe nsogbu maka post a… ọ gaghị agafe oge ọ bụla. Ọ bụrụ na e kpebie ikpe a ma pịa ya utịpị n'ihu ọha, ọ gaghị azọpụta m. Echere m na m na-apụ na ikike niile.
John Stossel kwuru eziokwu. -Zụ ahịa a na-atụ egwu site na azụmahịa na mgbasa ozi enweghị njikwa. Nke bu eziokwu bu na azụmahịa nke njirimara onye na-ezu ohi ga-agbanwe ego na-enweghị oke oke karịa izu ohi. Mana ọ dọbara uche nke ndị ji ụgwọ, ndị gọọmentị, na ndị mgbasa ozi n'ihi ya, ọ ga-abụ ihe ngosi maka nwa oge. E gosipụtara data anyị niile na nke a ọjọ Internet na anyị na-adịghị anya niile na-assimilated. Enweghị nkwụsị ya. Anyị agwụla. Thewa na-agwụ.
Ma ọ bụ ọ bụ?
Dabere na ọnụ ọgụgụ, 69.4% nke ezinụlọ ndị America niile na-eji Internetntanetị ugbu a. Americansjọ 210,000,000 ndị America nọ na nowntanetị ugbu a. Otu a ka ozi kredit kaadị ha si, akụkọ kredit ha, maapụ agbata obi ha, ozi gbasara mmekọrịta ha na ọha, uru ụlọ ọrụ ha, itinye ego ha na akụkọ ihe mere eme banyere ha.
Chei ... na ụdị ọnụọgụ ndị ahụ, ọ ga-abụrịrị na ọtụtụ nde ndị mmadụ na-emetụta Ohi Nzuzo, nri? Ọfọn ... nope.
Dị ka FTC, enwere ikpe mkpesa nke 246,000 nke mkpesa izu ohi njirimara na 2006 (B from site na 255,000 na 2005). Nke ahụ bụ 1 n'ime ndị ọrụ Internetntanetị 1,000 ọ bụla, nri?
Dabere na FTC, ọ bụ naanị 1.9% nke ihe niile gbasara izu nzuzo mere na ịntanetị. 4,674 ndị mmadụ. Ya mere, 98.1% nke ihe niile Identity Izu mkpesa na-adịghị metụtara Internet. Ka anyị mee ụfọdụ mgbakọ na mwepụ…. nke ahụ bụ 0.0022% ohere inweta ka ezuru gị Identity na .ntanetị. Ma ọ bụ 1 n'ime mmadụ 45,000 ọ bụla. 3 ruo 6% nke Thezu ohi mere n'ihi ngabiga data na isi mmalite, ọtụtụ ndị na-eme n'ụlọ ọrụ ego ma na-ezu ohi n'ụzọ anụ ahụ, ọ bụghị site na kọmputa.
Apụghị m ịhụ otu mkpesa na niile nke data m enyocha ebe tara data e hacked electronic site na ndị ọzọ na ebe nrụọrụ weebụ. Ọbụghị otu mkpesa.
Ka ụjọ? Gị emegide nke igbu ma ọ bụ ịnwụ site na ọdịda ma ọ bụ ịnwụ site n'ihe mberede ụgbọ ala ma ọ bụ ọbụlagodi site na ọnya na-emerụ onwe gị ahụ karịrị nsogbu gị nke ịbụ onye e jidere n'aka wayo Identity na Intanet. N’ezie, ohere nke stewa na-enweta ikuku na mbara igwe na narị afọ sochirinụ karịrị nke ị bụ onye a na-enyo enyo na njirimara nke Intanet.
N'iburu nke ahụ n'uche, m ga-agbakwunye na ihe niile, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọtụtụ, nke ikpe ndị a na-ahụ maka Internet Identity Fraud mere n'ihi atụmatụ aghụghọ na ntanetị… ebe onye ọrụ batara na saịtị adịgboroja nke etinyere ebe ahụ maka naanị izu ohi gị. Ha esighi na saịtị ziri ezi ebe ezuru njirimara ndị mmadụ.
Gịnị mere? Enwere ihe ole na ole, mana ihe dị mkpa bụ na ọ dị mma ka isntanetị dị na nchekwa data gị, ọ dịkwa mma mgbe ị na-edekọ ozi ọ bụla dị na ya. Chọpụtala mgbe ngwa ngwa ndị mmadụ na-enyo enyo mgbe ụmụaka na-ese foto gba ọtọ? Ọ dịịrị mmadụ mfe iji zuo ụfọdụ akwụkwọ sitere na ụlọ ọrụ ego dị na mpaghara gị karịa ka ọ ga-esi gbalịa weghachite ya na weebụsaịtị.
Ikwubi… kwụsị ichegbu onwe gị. Nye ndị ọrụ nchekwa na ụlọ ọrụ mgbasa ozi… kwụsị ịchụ ụjọ niile! O doro anya na anaghị m adụ gị ọdụ ka ị jiri aha mbụ gị dị ka paswọọdụ ma hapụ ozi kaadị akwụmụgwọ gị na profaịlụ gị, mana ị gaghị atụ ụjọ ịbanye na saịtị ziri ezi na ịchọta akaụntụ akụ gị n'echi ya. Ọ naghị eme otu ahụ. Enwere ihe ndị ka mkpa ị ga-echegbu onwe gị (dịka gị na ezinụlọ gị inwe ahụike, ntụkwasị obi).
Ma ọ bụrụ na ị na-eme ka a aja ọ bụla Identity Wayo, lee ụfọdụ ndụmọdụ.
Akwa post. Aghọtaghị m ihe kpatara na ndị mmadụ na-akparị onwe ha banyere itinye ihe ọmụma bụ isi banyere onwe ha na ịntanetị, ọkachasị ebe ọ bụ na enwere ike ịchọta ọtụtụ n'ime nke ahụ site na kọmputa. Maka ọtụtụ oge, enwere m ike ịnweta adreesị ndị mmadụ, akara ekwentị, ụbọchị agbamakwụkwọ, ụbọchị ọmụmụ ụmụaka, yana ụfọdụ ụgwọ ọnwa ha - niile na-enweghị ịnweta kọmputa (ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịchọ obere ọrụ). Debe foto gị n’igwe n’ịntanetị bụ ihe dịka iji mgbasa ozi SSN gị.
Echere m na paranoia na-aga n'ihu n'otú azụmahịa si ebute nche (ma ọ bụ ma eleghị anya ọnụ ọgụgụ ahụ dị otú ahụ n'ihi ya). Ndị ọchụnta ego ga-emefu ego na asambodo SSL na firewall, mana ozi ha jidere na-ebipụta ma tinye akwụkwọ na kọmịhe akpọchiri ebe onye ọ bụla nwere ike ịnweta. N'ezie, enwere ọtụtụ azụmaahịa na-ejikwa ọbụna nchekwa Internetntanetị n'ụzọ adịghị mma, mana m ga-eche na obere azụmaahịa nwere nchebe ka njọ karịa ịsị, ụlọ akụ, mgbe a bịara n'ụlọ ọrụ ha karịa weebụsaịtị ha.
Ọ na-egosi TJX nwere ike igosi m ihe ọjọọ… Ha agbasoghi ndụmọdụ ụlọ ọrụ kaadị kredit nyere maka otu esi echedo data ka ebuso usoro ha agha ma zuru data kaadị kredit. Enweghị echiche gbasara mmetụta nke izu ohi a, mana ọ nwere ike ịbụ nnukwu mbanye anataghị ikike nke kaadị akwụmụgwọ na akụkọ ntolite Internetntanetị anyị!
Hey Doug, daalụ maka isiokwu na-enye nkọwa. Aghọtaghị m otú eziokwu ahụ gafere-adị ruo mgbe ọnụọgụgụ gị tinye ya n'ọnọdụ niile. Echere m na ọ ka na-enyere ndị mmadụ aka ịkpachara anya na ozi ha n'agbanyeghị. Obere ihe dị ka ile anya na adreesị weebụ nwere ike inye aka igbochi phishing (dị ka email paypal na-agwa gị ka ị nye ha ozi kaadị akwụmụgwọ gị, mana adreesị dị n'elu enweghị "paypal" ebe ọ bụla na aha ahụ). Obere ezi uche na ịkpachara anya na-aga ogologo oge.